महिलालाई किन बढी हुन्छ हिस्टेरिया, कस्तो स्वभावकालाई धेरै ? यस्तो छ उपचार विधि – aajnepal
HomeHealthमहिलालाई किन बढी हुन्छ हिस्टेरिया, कस्तो स्वभावकालाई धेरै ? यस्तो छ उपचार विधि
November 10, 2018 aajnepal Health 0
जेन्सी । हिस्टेरिया विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । यो मानव स्वास्थ्यमा एक जटिलता बनेर आएको छ । हिस्टेरिया महिलालाई धेरै हुन्छ । अव्यक्त मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणको रूपमा प्रकट हुने समस्या नै हिस्टेरिया हो ।हिस्टेरिया अवचेतन मनको खेल हो । जसलाई बिरामीले मानसिक आघातको विरुद्धमा प्रयोग गर्छ । हिस्टोरिया ग्रिक शब्द हिस्टरोन अर्थात् पाठेघरबाट आएको शब्द हो ।दुई हजार वर्षअगाडि हिप्पोक्रेटस भन्ने ग्रिक चिकित्सकले यो समस्या महिलामा मात्र देखे र महिलाको प्रजनन अङ्ग पाठेघरसँग सम्बन्धित ठानेकाले त्यति बेला हिस्टेरिया भन्ने नामकरण गरे ।वर्षौंसम्म यो समस्यालाई यसै गरी हरियो । तर अनुसन्धानहरूले यो समस्याको यौनसँग कुनै सोझो सम्बन्ध नभएको तर तनावसँग सम्बन्धित भएको देखाए ।
– अनुसन्धानका अनुसार तनावका कारण हुन्छ ।– तनावको प्रकार जस्तो पनि हुन सक्छ ।– पढाइलेखाइको तनाव ।
– पारिवारिक तनाव ।– नाता सम्बन्धको तनाव– आर्थिक तथा सामाजिक तनाव– प्रतिस्पर्धाको तनाव– कामनापूर्ति नहँदाको तनाव– इज्जत प्रतिष्ठाको तनाव आदि ।– यौनसम्बन्धी समस्याहरूले तनाव– सङ्कीर्ण समाजमा यौनसम्बन्धी समस्याको तनाव निकै हुने गर्छ ।
म २४ वर्षकी भएँ । मेरो बूढाको लिंगको बाहिर छालामा एलर्जी आएको छ र…